| Burma Academy
Burma Academy သည် စစ်ကျွန်ပညာရေးကို သပိတ်မှောက်ပြီး အနာဂတ် ဖက်ဒရယ် ပညာရေးကို ဖော်ဆောင်လိုသော ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် CDM ဆရာ၊ဆရာမများ ထောက်ပံ့နိုင်ရေးကိုလည်း ရည်ရွယ်သည်။
ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်များမှ တိုက်ရိုက် ပညာသင်ကြားရင်း CDM Network အားထောက်ပံ့ပါ
Burma Academy သည် ပြည်တွင်း တက္ကသိုလ်များနှင့် စာသင်သား လူငယ်များကြား ပညာရပ်များပေါင်းကူးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ပြင် အခမဲ့ပညာရေးမူဝါဒနှင့် ဖက်ဒရယ်ပညာရေးအပေါ် အခြေခံသည်။
Burma Academy သည် Ministry of Education (NUG) ၏ Endorsement ကိုလည်း ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
Burma Academy တွင် ပညာသင်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် အခကြေးငွေမှ ကောက်ခံခြင်းမရှိပေ။
ပြည်တွင်း တက္ကသိုလ်များမှ ချီးမြှင့်မည့် Certificate များအား ထုတ်ယူနိုင်သည်။ အချို့သော Certificate များကိုမူ လှူဒါန်းငွေပေးသွင်းပြီး CDM Network ကို ထောက်ပံ့ပါ။
အချို့သော သင်ခန်းစာများကို တိုင်းရင်းသားဘာသာများဖြင့်လည်း သင်ယူနိုင်မည်။
တော်လှန်ရေးကာလတွင် အကျိုးပြုနိုင်မည့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများနှင့် လက်တွေ့အသုံးချပညာရပ်များအား အဓိကသင်ကြားသွားမည်။
Self-Paced ပုံစံ၊ Hybrid ပုံစံနှင့် Live ပုံစံ စသည့် ၃ မျိုးလုံးဖြင့် သင်ယူနိုင်မည်။
အင်တာနက် ခက်ခဲသော ဒေသများရှိ ကျောင်းသားများအတွက်လည်း သင်ခန်းစာများ ဖြန့်ဝေနိုင်ရန် စီစဉ်သွားမည်။
These are the next scheduled courses being run.
Introduction to United Nations and Its Mechanisms
In this course, students will have the opportunity to explore the United Nations and its mechanism and will know about the United Nations’ organizations such as United Nations Human Right Council, United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef), UN women, United International Court of Justice, International Criminal Court and what is the difference between ICJ, ICC and it’s prosecution process.
Combat Medic Training Course
ဤ course တွင် Combat medic တစ်ယောက်သိထားသင့်သော Combat trauma management and tactical combat casualty care နှင့်ပတ်သတ်သော skill များကို သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ စစ်မြေပြင်ဒေသများတွင် ဒဏ်ရာရလူနာများကို care ပေးလိုသော medic များတက်ရောက်သင့်သည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး) ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီမှပို့ချသော Courseတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Deep Learning ဘာသာရပ်နှင့် ပက်သက်၍ အခြေခံမှစ၍ လေ့လာသင်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဒီ course လေးက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်မေမေတို့အတွက် သိသင့်သိမှတ်ရာ အဖြာဖြာကို သေချာရှင်းပြပေးမဲ့ course လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခုပဲ enroll လုပ်လိုက်ရအောင်။
COVID-19 Capacity Building For Undergrads
This course is aimed at Medical and Medical Alliance Universities' students. You will learn basic knowledge on COVID-19 and its management plans.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး) ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီမှပို့ချသော Courseတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Machine Learning ဘာသာရပ်နှင့် ပက်သက်၍ အခြေခံမှစ၍ လေ့လာသင်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
We perform that you can easily make hand sanitizer at home.
The Importance of Soap and Soap making
In this course, you are going to learn the importance of soap and soap making.
အတွေးအခေါ်တော်လှန်ရေးနှင့် ကျားမရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများ (Gender Concepts)
Burma Academy နဲ့ တိုင်ပင်ဖော်တို့ လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး ပြည်သူလူထုအကြား စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပက်သက်တဲ့ ဗဟုသုတများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောက်ရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ “Basic Mental Health Awareness Raising Program - လူတိုင်းသိစရာ စိတ်ကျန်းမာ” ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေးကို ပို့ချသင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြားကာလပညာရေးအတွက် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှ ပို့ချပေးသည့် အကူးအပြောင်းကာလ တရားမျှတမှု(Transitional Justice)နှင့်ပတ်သက်သော သင်ခန်းစာဖြစ်ပါသည်။
LCCI Level - 1
ယခုလိုကာလမှာ ပြည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ မျက်စိနဲ့နားတွေဖြစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ နည်းစနစ်ကျပြီး သတင်းပေးပို့သူ၊ သတင်းထောက်တွေ ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် ဥဩစာသင်ကျောင်းမှ Citizen Journalism and Media Literacy Course (အခြေခံသတင်းစာပညာနှင့် မီဒီယာကိုနားလည်ခြင်း) ကို မိတ်ဆက်လိုက်ရပါသည်။
အဓိက ရည်ရွယ်ချက် (၄) ရပ်
- ကျောင်းသားများ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသည့် ကြားကာလပညာရေး (Alternative Education) ကို ဖော်ဆောင်ရန်
− နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်နှင့် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သည့် ပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးခြင်းအားဖြင့် တော်လှန်ရေးကိုအထောက်အပံ့ပြုရန်
- စစ်အာဏာရှင်ပညာရေး စနစ်ဟောင်းကိုဖြိုဖျက်၍ ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်အသစ်တစ်ခု ဖော်ဆောင်ရန်
− လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး (Inclusive Education) ကို တည်ဆောက်ရန်
Burma Academy သည် စစ်ကျွန်ပညာရေးစနစ်အား ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်၍ ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ် အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန် အရွေ့တစ်ခုအဖြစ် အားဖြည့်ပေးသော Educational Platform တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Burma Academy တွင် ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် Organizations / Institutes အသီးသီးမှ လာရောက်သင်ကြားပေးသော Quality စံနှုန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် online course များစွာကို လေ့လာရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Burma Academy ကို
University of Medicine 1 Students' Union
Oak Awe Institute
စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲစည်းခဲ့ကြပြီး အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်းများမှ လာရောက်သင်ကြားပေးရန် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။
Burma Academy သည် ပြည်တွင်း တက္ကသိုလ်များ၊ တော်လှန်ရေးအဖွဲအစည်းများဖြင့်လည်း အစဉ် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီး လွတ်လပ်မျှတသော ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ် ဖော်ဆောင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ကဏ္ဍများမှ အမြဲတစေ ပါဝင်အားဖြည့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
© 2022 Burma Academy | All rights reserved.
Burma Academy Twitter